Ehe, hongu: zvinoita sekunge iyo iPhone 7 ichave zvakare iri nhema | IPhone nhau
Ehe, hongu: zvinoita sekunge iyo iPhone 7 ichave zvakare iri nhema
Kana ini, sevazhinji, ndikati OnLeaks ndiyo yakanakisa firita yenguva, ndinozvitaura nechikonzero. Iye wechiFrench ndiye akaburitsa zvirongwa zvekutanga zveiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus, kunyangwe iye pachake akabvuma kuti aya marongero ekutanga aive asina kunyatsokwana nekuti vaive nemutauri mumwe chete, asi Apple yaive ichiri kusarudza kuti ndeipi yaizovhura. Akataura zvakare muna Chikumi 27 kuti iyo iPhone 7 yaizove mune nyowani inenge nhema nhema Uye nhasi akatumira mufananidzo unoratidza matatu maSIM kadhi trays anotaridzika kusviba zvachose.
Panguva ino tinofanirwa kurangarira, zvakare, kuti Apple yakamira kuvhura yevatema iPhone mushure mematambudziko avakave nawo neiyo iPhone 5, chishandiso chine aruminiyamu kumashure uye bezels iyo yakaguma ichirasikirwa yakawanda yerudzi rwayo uye inokwezva. Kutanga neiyo iPhone 5s, Apple yakaburitsa iyo nzvimbo grey, ruvara rusina kugonesa vashandisi vazhinji vakachinjira kune rimwe vara, senge sirivheri, goridhe kana, yekupedzisira kuoneka, yakasimuka goridhe.
IPhone 7 SIM tireyi nhema
Zvakanaka mushe… 🙂 #iPhone7 pic.twitter.com/czUTFZja7d
- OnLeaks (@OnLeaks) August 7, 2016
Ko iyo # iPhone7 ichave mune nyowani, yakasviba (inenge nhema) kunaka pane iya yakambonzi "Deep Blue"? Hungu changamire… # Simbiso
Zvakanaka, tsime, zvakanaka… iPhone # iPhone7
- Steve Hemmerstoffer (@stagueve) August 7, 2016
Izvo zvisina kujeka ndizvo zvichaitika kune iyo nzvimbo grey kana bhuruu iyo makuhwa akataura nezvayo. Mune mawonero angu, hazvinganzwisisike kuvhura nzvimbo grey kana padhuze padhuze modhi, nekuti avo vanoda dema mudziyo vanoda kuti iyo iPhone ive nhema zvachose. Kune rimwe divi, aya matireyi anovhara musuwo kusvika kwekuuya kweiko kusvika parizvino raizivikanwa se Deep Blue? Kugadzirisa kusahadzika kwedu kwese tichazofanira kumirira, asi pane zvishoma uye zvishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Ehe, hongu: zvinoita sekunge iyo iPhone 7 ichave zvakare iri nhema
Jonathan Contreras contreras akadaro
Nezve iro vara ndinogona kuve nechokwadi kuti rinogona kubuda rakasviba, iyo aluminium 7000 inonamatira zvakanyanya kune iyo ruvara kwete senge inopenya yeiyo iPhone 5, saka kana ikazobuda nhema ichave iine 3D Bhatani bhatani, iSight kamera, uye iyo pro ichave iri mbiri kamera pakati pezvimwe zvinhu zvitsva
Pindura Jonathan Contreras contreras
Tarisa, kugadzirisa mazes asingagone muapp yevhiki
Luca Todesco anotiratidza maitiro ekuita jailbreak iOS 9.3.4